Madaxweynaha oo markii u horeysay ka hadlay muranka ka taagan dhismaha Baarlamaanka Jubba – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii u horeysay ka hadlay muranka ka taagan dhismaha Baarlamaanka Jubba iyo cabashooyinkii ka dhashay, taasoo keentay in mooshin laga keeno, kadibna uu Baarlamaanka meel mariyo.
War saxaafadeed ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha ayaa waxaa loogu baaqay Guddigii dhowaan Xukuumadda u magacawday xalinta tabashooyinkii ka dhashay dhismaha baarlamanka maamulka KMG ee Jubba inay dardar geliyaan hawshooda.
Madaxweynaha ayaa sheegay in isaga iyo Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid Cumar Sharma’arke ay horey maamulka Jubba uga wada hadleen xalinta tabashooyinka jira, la iskuna afgartey dhismaha guddi heer wasiiro ah, si ay u guda galaan qaabka ugu wanaagsan ee beelaha wada dega Jubbooyinka loo qancin lahaa.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa sheegay in Soomaaliya oo ah dal ka soo kabanayaa colaado sokeeye, looga baahan yahay shacabkeeda inay la yimaadaan isku tanaasul iyo wadahadal si loo unko mustaqbal cusub oo ka duwan kii hore.
“Aniga iyo mas’uuliyiinta kale ee dowladda iyo baarlamanka waxaan isku aragti ka nahay dardar gelinta hawlaha dib u heshiisiinta iyo fulinta barnaamijyada la xiriira Hiigsiga 2016, Dhismaha maamullada waa qeyb muhiim ah oo ka mid ah dib u soo kabashada dalkeena, caqabad walba oo la soo gudboonaatana waxaa naga go’an in wadahadal lagu dhammeeyo, isla markana dib u heshiisiintu ay sal u noqoto mustaqbalka soo socda ee Soomaaliya” ayuu yiri Madaxweynaha.
Maamulka Jubba ayaa shalay ku dhawaaqay inuu xiriirkii wada shaqeyn u jaray dowladda Federaalka, iyagoo ka jawaabayay go’aankii Baarlamaanka uu ku meel mariyay mooshinkii ka dhanka ahaa dhismaha Baarlamaanka Jubba, kaasoo Baarlamaanka Federaalka ku tilmaamay mid sharci darro ah.